Evernote anozoparura chirongwa chepamutemo cheLinux | Linux Vakapindwa muropa
Evernote anozoparura chirongwa chepamutemo cheLinux
Zvese zviri muWindows anoshanda masystem. Ndiyo chete nharo yandaizopa seyakanaka kudzivirira iyo Microsoft system: zvese zviripo uye, uyezve, mune dzakawanda dzakasiyana sarudzo. Vashandisi veLinux, uye dzimwe nguva vashandisi veMacOS, vanofanirwa kushandisa zvatinoona kana zviripo, izvo zvisina kugara zvakashata, asi zvinowanzorevawo kuti isu hatina mamwe maitiro epamutemo. Izvo zvinoitika muLinux neapp Evernote, asi izvi zvinogona kuchinja munguva pfupi.
Izvi zvakaburitswa naIan Small, CEO weEvernote, mune blog blog rakabudiswa maawa mashoma apfuura. Ian akataura nezve kuenderera mberi kwekuvandudza kweyepamutemo desktop mutengi weOS based pane linux, kutaura kuti timu iri kushanda mukugadzirisa uye kutamisa dhata kune gore kumhanya kwazvo. Kuti pachave neshanduro yeLinux harisi ruzivo rwepamutemo, asi zvikasadaro chingave chinhu chisingafadzi kushamisika.
Evernote paLinux? Zvinogona kuve zvechokwadi mu2020
Muna Zvita, takaburitsa yakagadziriswazve vhezheni yedu yemazuva ano yewebhu ruzivo kune diki boka revatengi. Uye, sekuronga, havana kucherechedza. Kunze, iyi vhezheni ingangoita isingazivikanwe kubva kune izvo vazhinji vedu vatinoshandisa zuva nezuva. Asi nechomukati, kodhi yayo yekodhi yakagadziridzwa zvakanyanya pamusoro peraibhurari nyowani yemakodhi anotonga kutaurirana pakati pemutengi uye gore..
Pasina dhata rekongiri, kuchine kusahadzika kwakawanda: hazviite kuti uzive kana Evernote yeLinux ichasvika senge vhezheni Electron redesigned web client kana kuti zvachose chitsva, chizvarwa application. Mudiki kana mumwe munhu kuchikwata chake angangotipa zvimwe zvakawanda munguva pfupi iri kutevera.
Parizvino, kana tichida kushandisa Evernote paLinux yatinayo zvisina kukodzera sarudzo, kupinda sei kubva kubhurawuza kana mutengi mune Snap package iyo yatinogona kuona mukati Iyi link. Kana zviri zvebrowser, kune zvekare zvakawedzeredzwa, kana firefox ni Chrome's ndidzo sarudzo dzepamutemo. Sarudzo yepamutemo yaigona kusimudzira rutsigiro uye, kana vakagadzira rwekuzvarwa app, iko kuita kungave kwakanyanya kwatinogona kushuvira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Evernote anozoparura chirongwa chepamutemo cheLinux
Mangwanani akanaka! Panguva yandaishandisa zvakanyanya asi handina kana kunhuhwa kwemakore.
Uye sezvo zvichiri izvo zvakajairika Electron kunyorera (zvinova zvinorwadza mumutsipa!) ... dzima tiende.
Kutaurisa kwangu kunoenda nenzira imwecheteyo naD. Juan. Vakakwanisa kundizadza nebandwidth uye nemipimo yekushandisa, ndakaishandisa nekuti ini handina kuwana imwe nzira, asi naJoplin, ndiani anoda Evernote? Mukana wega weEvernote ndewekuti wakanaka, zvimwe zvese, zvese zvakaipira.
Zvakanaka, handina kumboishandisa kwemakore…. kusave neyekuzvarwa app inodarika kubva pairi.
DXVK vhezheni 1.5.2 yave kuwanikwa uye inowedzera zvigadziriso zvakasiyana zvemitambo
Amazon inokumbira dare kuti rimise chero basa reMicrosoft kuJEDI